Wasaaradda Beeraha waxay rajeyneysaa firfircoonaan wanaagsan ee dhismaha warshadaha beeraha sanadka 2020 - Nidaamka Baradhada
Sanadihii la soo dhaafay, dhismaha warshadaha beeraha, oo ay ku jirto kororka taageerada dowladda, wuxuu muujiyay koritaan joogto ah, waa mid ka mid ah wadayaasha dhaqaalaha gudaha wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa hubinta horumarka dhaqan-dhaqaale ee joogtada ah ee Ruushka. Sannadkan, Wasaaradda Beeraha ee Ruushka waxay rajeyneysaa sii socoshada wanaagsan ee dhinaca warshadaha, ”ayaa lagu yiri farriinta.
Gaar ahaan, sida laga soo xigtay wakiillada wasaaradda, sannadka 2020 waxaa la filayaa in la kordhiyo acreage-ka dalagyada waaweyn, oo ay ku jiraan galleyda hadhuudhka ah - illaa 2,7 milyan oo hektar (sannadka 2019 - 2,6 milyan oo hektar), bariis - illaa 197,4 kun ha (sannadka 2019 - 194 kun ha), buckwheat - ilaa 858,2 kun ha (2019 - 806,6 kun ha). Baradhada waxaa la dul dhigi doonaa dhul dhan 1329,1 kun oo hektar, taas oo 51,2 kun hektar ka badan tii sanadkii hore. Waxaa la filayaa in 527,2 kun oo hektar lagu beeri doono dalagyo khudaar ah (sanadka 2019 - 517,3 kun oo hektar). Xilligan, Wasaaradda Beeraha waxay ku howlan tahay hagaajinta qaab dhismeedka meelaha lagu beeray baradhada iyo khudradda si kor loogu qaado wax soo saarkooda.
Marka loo eego saadaasha Wasaaradda, wadarta guud ee dhulka la beeray waxay noqon doontaa 80,3 milyan oo hektar, taas oo ah 0,8 milyan in ka badan marka loo eego sannadka 2019. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Beeraha, ilaa bishii Maajo 26, 2020, dalka oo dhan, abuuridda guga waxaa lagu fuliyay dhul dhan 43 milyan oo hektar, ama 83% aagga la saadaaliyay. Hawsha guud ee shaqada ayaa hadda ka sarreysa tii sanadkii la soo dhaafay.
Tags: Wasaaradda Beeraha
Noocyada Michurian waxay abuuraan baradhada aan fayraska lahayn
Arrin cusub oo ah majaladda Nidaamka baradhada!
Hindiya waxay la kulantay duulaankii ugu ba’naa ee dhacay 30 sano